PUBG Mobile ကိုလစဉ်ကစားသူသန်း ၂၀ သည် Androidsis
လွန်ခဲ့သော ၆ လက PUBG Mobile ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်တက်ကြွစွာအသုံးပြုသူသန်း ၂၀ ခန့်ရှိကြောင်းယနေ့ကြေငြာခဲ့သည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းမှဂိမ်းပါရာဒိုင်းကိုပြောင်းလဲစေသောဂိမ်းတစ်ခုအတွက်အတော်လေးမှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကြောင်းပြချက်တစ်ခုတည်းအတွက်၎င်း၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်မှကြီးမားသောဂိမ်း: ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်သွားသည် (ဘက်ထရီများစွာမသုံးစွဲပဲ) စမတ်ဖုန်းပေါ်မှာ။ Fortnite မပြောနိုင်သည့်အရာ၊ မကြာသေးမီက Epic Games ကဖြန့်ချိခဲ့သည်နှင့်၎င်းသည်အရင်းအမြစ်များပိုမိုလိုအပ်သကဲ့သို့ဘက်ထရီစွမ်းရည်ပိုမိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
နှစ်လတစ်ကြိမ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမြေပုံအသစ်နှစ်ခုနှင့်အတူ Miramar အတွက်တစ်ခု၊ Sanhok များအတွက်အခြားTencent Games သည်အလွန်ကောင်းသည်ကိုပြသနေသည် သန်း 20 လစဉ်တက်ကြွကစားသမားရောက်ရှိရန်.
၆ လအတွင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနေ့စဉ်သုံးစွဲသူသန်းသန်း ၂၀! ဒီဝေးကိုယူပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် #pubgmobile သင်္ဘောသား! pic.twitter.com/l8ubeDJllr
- PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) စက်တင်ဘာလ 13, 2018
ကြောင်းပြသတဲ့ပုံ မိုဘိုင်းဂိမ်းအတွက်စူးစမ်းဖို့လယ်အများကြီးရှိပါတယ် အထူးသဖြင့် multiplayer မှဖြစ်သည်။ စမတ်ဖုန်းသည်အခြားကစားသမားများနှင့်အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းကိုအခြားပလက်ဖောင်းများနှင့်ယှဉ်။ မရနိုင်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာဤနေရာ၌ကျွန်ုပ်၏ PUBG Mobile ကိုကစားသူရာပေါင်းများစွာနှင့်ဆန့်ကျင်သောကစားနည်းကိုကစားနိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုင်းများမှတဆင့် ဤနောက်ဆုံးသတင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြေငြာခဲ့သည်အဖြစ်ကောင်းစွာအတွက်အချို့သောလမ်းညွှန်များ ပိုကောင်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်လာသည် o ဖျော်ရည်အားလုံးကိုယူပါ ဖြစ်နိုင်တယ် အရာနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်နွေရာသီအတွက်ရောက်ရှိလာခဲ့သည် မျက်စိ - ဖမ်းမိသတင်းနှင့်အတူ PUBG Mobile ၏ရာသီသစ်လိုပဲ.
ငါတို့သည်လည်းမမေ့မလြော့ပါ ရရှိနိုင်ပါ beta ကိုဗားရှင်း အတွက် PUBG မိုဘိုင်းလ်၏သတင်းကိုအခြားသူများအားစစ်ဆေးပါ, သို့မဟုတ်သော lite ဗားရှင်း အရင်းအမြစ်များအတွက်အနိမ့်စွမ်းရည်၏ devices များအတွက်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် PUBG Mobile အတွက်လစဉ်အသုံးပြုသူသန်း ၂၀ ရှိသည် ဂိမ်းကဘယ်လောက်ကောင်းသလဲဆိုတာပြသတဲ့အနေနဲ့ဂိမ်းရှုခင်းတော်တော်များများကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » PUBG မိုဘိုင်း » PUBG Mobile သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်နေ့စဉ်သုံးစွဲသူသန်း ၂၀ သန်းကို ၆ လအတွင်းရောက်ရှိသည်
Unstold, Instagram Stories ကိုရိုးရှင်းတဲ့နည်းနဲ့ဖန်တီးဖို့စိတ်ဝင်စားစရာ app တစ်ခု